99 सिटी मा Odorless Maggot खेती मा प्रशिक्षण • Yurie बीएसएफ
99 शहरमा अनावश्यक मागग खेतीमा प्रशिक्षण
Yurie | फरवरी 16, 2019 | Odorless Maggot खेती प्रशिक्षण
ई प्रशिक्षण ++ बगैचा प्रशिक्षण बिना आधुनिक बीएसएफ खेती
BSF आधुनिक बगैचा खेती ई प्रशिक्षणको लागि मात्र प्रशिक्षण हो। ++। जो तपाईंलाई सफल हुन को लागी गारंटी दिन्छ। सबै ई प्रशिक्षण ++ प्रशिक्षण ट्यूटोरियलहरू जग्गा खेती तपाईं प्लेस्टोरमा Yurie BSF अनुप्रयोग मार्फत डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। Yurie BSF को साथ बीएसएफ खेती प्रशिक्षण तपाईं आफ्नो शहर मा सबै भन्दा निकट अभ्यास स्थान को चयन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रशिक्षणको कारण मगग पशुहरू ++ तपाईंसँग पनि 99 भित्र इन्डोनेशिया भर मा अधिक शहरहरु मा फैली Yurie बीएसएफ खेतहरुमा अभ्यास गर्ने अधिकार छ। बीएसएफ पशुधन प्रशिक्षण जुन बेजोड हो र सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएको छ।
Yurie BSF अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्
Odorless Maggot प्रशिक्षण प्रक्रिया
त्यसपछि तपाइँ प्लेस्टोरमा Yurie BSF अनुप्रयोगमा पहुँच दिइनेछ
तपाईं पनि ग्रुप बिना गोप्य समूह एफबी आधुनिक संस्कृति प्रवेश गर्न निमन्त्रणा दिइनेछ
अभ्यासको लागी वस्तुहरूको डेलिभर 2x24 घण्टामा दर्ता पछि पठाइएको छ
बीउको डिलिवरी, लार्वा अण्डा तैयारी अनुसार समायोजित हुन्छ
तपाईंसँग Yurie बीएसएफ खेतहरुमा एक क्षेत्र अभ्यास गर्ने अधिकार छ
तपाईंले सफल नभएसम्म क्षेत्रीय अभ्यास पछि दिशानिर्देश गरिन्छ
सामेल हुनुभन्दा पहिले, तपाइँलाई BRI बैंक ट्राफिक मार्फत प्रशिक्षण शुल्कको लागि भुक्तानी प्रमाण पठाउन दर्ता गर्नु पर्छ।
र तपाईंलाई प्रशासक रेकर्डको रूपमा आईडी कार्डको प्रतिलिपिको लागि सोधिएको छ।
Yurie BSF अनुप्रयोग पहुँच
स्थानान्तरणको प्रमाण पठाउन पछि, तपाइँलाई प्लेस्टोरमा Yurie BSF अनुप्रयोग खोल्न विशेष पासवर्ड पाउनुहुनेछ।
Yurie BSF अनुप्रयोगमा प्लेस्टोर तयार गरिएको छ:
सिद्धान्त र अभ्यासको लागि तीन guidebooks
बगैचा चुम्बन खेतीको लागि ट्यूटोरियल
सूत्रले मगग पास्ता बनाउँछ
कार्बनिक तरल उर्वरक (पीओसी) म्यागोग्राफ को विभिन्न पत्ती र फल पौधेहरु को लागी आवेदन
ठोस चुम्बन उर्वरको सही अनुप्रयोग
पासवर्ड की कुञ्जी प्राप्त गरेपछि, तपाईंले भर्खरै एक इन्टरनेट जडानको रूपमा जहाँसम्म लामो हुनुहुने अभ्यास भिडियो खोल्न, डाउनलोड गर्न र हेर्नु पर्छ।
Yurie बीएसएफ आवेदन धेरै ठूलो छ किनकि त्यहाँ धेरै भिडियोहरू र कागजातहरू छन्, तर उन्नत प्रविधिसँग, 16MB मा आवेदनको अन्त्य परिणाम धेरै प्रकाश हुन्छ।
हामीले यो उन्नत सुविधा तयार गरेका थियौँ कि Yurie BSF अनुप्रयोग पुरानो सेलफोन प्रकारद्वारा पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
गुप्त समूहमा सामेल हुनुहोस्
तपाईंको अर्को चरण विशेष गरी BSF बिना आधुनिक बीएसएफ खेती को रहस्य को एफबी समूह मा दर्ज गर्न को लागि आमंत्रित गरिनेछ।
एफबीमा बिना गंधको आधुनिक बीएसएफ खेतीको गोप्य समूह तीन तहमा विभाजित हुन्छ, अर्थात्
यस समूहमा तपाई इंडोनेशिया भर मा सबै Yurie बीएसएफ साथीहरु लाई भेट्नुहुनेछ। तिनीहरूले आफ्नो अनुभव र गठन समुदायहरूलाई तिनीहरूको सम्बन्धित शहरहरूमा साझा गरे।
कृपया पोलिट एड्याबसँग छलफल गर्नुहोस्। हामी दृढतापूर्वक "मक्खी" मजाकहरूमा कार्य गर्नेछौं जुन सफल हुँदैन र चीजहरू जुन सफल खेतीको प्रयासमा केही गर्न सक्दैनन् Maggot BSF गजल।
यो तह विभाजनले मगग खेती गर्ने दैनिक अभ्यासमा बढी ध्यान केन्द्रित सबै Yurie बीएसएफ साथीहरू बनाउन चाहन्छ।
प्रत्येक स्तरमा तपाईं सफल भएका एक वा दुई जना सल्लाहकारहरू द्वारा निर्देशित गरिनेछ। त्यसो भए के हो भनिन्छ अभ्यासको परिणाम परीक्षण र त्रुटि सिद्धान्त होइन।
प्रत्येक प्याकेज खरिद गरिएको छ, तपाईले घरमा आफ्नै अभ्यासको लागि बीउ, अण्डा, लार्वा र अन्य सहायक उपकरणहरू।
यो प्याकेज दुई कोटिहरु, अचम्मको वस्तुहरु र जीवित चीजहरु मा विभाजित छ। Inanimate कोटिहरू2X 24 घण्टा पठाइने छौं पछि हामी स्थानान्तरणको प्रमाण प्राप्त गर्दछौं,
बीज, अण्डा, लार्वा आदि जस्ता जीवित वस्तुहरूको कोटिहरू तपाईंको तैयारी अनुसार पठाईनेछ। यो उद्देश्य हो जुन पठाइएका लाइभ वस्तुहरू तत्कालै पूरा भए पछि प्राप्त हुन्छ।
कूरियर सेवाबाट सामानको डिलिवरीको प्रमाण हामी रसिदको रूपमा छनौट गर्दछौं र तपाईले ढुवानीको स्थान जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।
अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्षम हुनु पछि र आफैलाई सिक्नु पनि समूहमा सामेल हुनुहोस्, तपाईले प्रत्यक्ष रूपमा योनि इन्डेनेस भित्र 99 शहरहरु भन्दा बढि फैलिएको बृद्धालयहरु मध्ये एक मध्ये अभ्यास गर्न सिक्नु पर्छ।
तपाईं एक प्रशिक्षक द्वारा बमबारी गरिनेछ जुन पहिल्यै प्रशिक्षित गरिएको छ र आधुनिक बीएसएफ खेतीको गन्ध बिना गन्धको प्रमाणपत्र प्राप्त हुन्छ। त्यसोभए तपाईं त्यसै कुरा सिक्नुहुनेछ।
यो निश्चित रूप देखि तपाईं एक नजिकै को शहर मा अभ्यास गर्न को लागी एक फायदा हो। किनकि दूरी नजिक छ, तपाईंलाई यातायातको लागि ठूलो शुल्क तिर्न आवश्यक छैन, उडान टिकट, आवास आवास लागत र समय लचीला पनि छन्।
माथिको प्रक्रिया पछि, तपाईंले अझैसम्म काम नगरेसम्म मार्गदर्शन पाउनुहुनेछ।
तपाईंको चुम्बन Rur7.000 / kg को लागि Yurie BSf द्वारा खरीद गरिनेछ। त्यसैले फेरि मार्केटिंग को लागी को बारे मा चिंता को आवश्यकता छैन।
तर यदि तपाई युरीमा बेच्न चाहानुहुन्छ भने यो पनि फरक छैन। तपाईं निर्णय गर्न निःशुल्क हुनुहुन्छ जहाँ तपाईं चाहानुहुन्छ मगग बेच्नुहोस्- बग।
चाँडै वा पछि नराम्रो मगगको खेतीले धेरै मेगगोट उत्पादन गर्छ। यदि तपाईं सजिलै संग म्यागगेट बेच्नु भएको छ भने Yurie BSF।
हामीले Rp100.000.000 को एक मित्रको सहयोग कोष प्रदान गरेका छौँ - - जग्गा उत्पादनको विकास गर्न।
पेशेवर सल्लाहकारहरूको साथ सीधा सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ
संयुक्त ई प्रशिक्षण र अफलाइन (क्षेत्र अभ्यास) सिक्दा सबै र जहाँ पनि तपाईं इच्छामा हुनुहुन्छ। तपाईं पनि विषय वस्तु डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
बगगढी मैग्लट खेती विधि सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएको छ र हजारौं युरी बृद्ध मित्रहरु द्वारा परीक्षण गरियो
खेतीको सामग्री सधैँ आवश्यक पर्दछ
भिडियो प्रशंसकहरू र वास्तविक प्रशंसापत्रको रूपमा हामीलाई प्रशिक्षक सहभागीहरूको प्रशंसा गर्दा तपाइँ YouTube च्यानल Yurie BSF मा लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ।
प्रशिक्षण प्याकेजको मूल्य के हो?
E प्रशिक्षण ++ प्रशिक्षणले भुक्तान वा निःशुल्क गर्दैन, तपाइँले भुक्तान गर्नुभएको सबै प्याकेज हो। प्याकेजको मूल्य Rp100.000-RpXXUMX बाट तपाइँले चयन गर्नुभएको प्याकेजमा आधारित हुन्छ।
के यो शुरुवातका लागि उपयुक्त छ?
धेरै उपयुक्त। किनभने पुस्तक सामग्री र ट्यूटोरियल भिडीयोहरूको लागि मार्गदर्शक सामग्री धीरे-धीरे शून्यबाट सफल हुन सफल हुन्छ। तपाईंले भर्खरै आवश्यक ई + प्रशिक्षण ++ प्रशिक्षण प्याकेज रोज्नु पर्छ।
सबै भुक्तानीहरू एक पटक बनाउन सकिन्छ?
नहीं। खरीद गरिएका वस्तुहरूको संकुल तपाईंले खरीद गर्नुभएको सामग्रीको फोकस अनुसार हो।
के ट्यूटोरियल डाउनलोड गर्न सकिन्छ?
हो, तपाईं कागजात मोड्युल डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्य 2000 ++ सँग सामेल हुनुहोस्!
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् Tel / WA 0812-2105-2808